Mandefasa mailaka amin'ny alàlan'ny SMTP amin'ny WordPress miaraka amin'i Microsoft 365, Live, Outlook, na Hotmail | Martech Zone
Raha mihazakazaka ianao WordPress toy ny rafitra fitantanana votoatinao, ny rafitra dia namboarina mba handefasana hafatra mailaka (toy ny hafatry ny rafitra, fampatsiahivana tenimiafina, sns.) amin'ny alàlan'ny mpampiantrano anao. Na izany aza, tsy vahaolana tokony hatao io noho ny antony roa:
Ny mpampiantrano sasany dia manakana ny fahafahany mandefa mailaka ivelany avy amin'ny mpizara mba tsy tanjon'ireo mpijirika hanampy malware izay mandefa mailaka.
Ny mailaka avy amin'ny mpizara anao matetika dia tsy voamarina sy voamarina amin'ny alàlan'ny fomba fanamarinana ny fandefasana mailaka toy ny SPF or DKIM. Midika izany fa ireo mailaka ireo dia mety alefa mivantana mankany amin'ny folder junk.
Tsy manana firaketana ny mailaka ivelany rehetra atosika avy amin'ny mpizara anao ianao. Amin'ny alàlan'ny fandefasana azy ireo amin'ny alàlan'ny Microsoft 365, Live, Outlook, na Hotmail Kaonty, ho hitanao ao anaty lahatahiry nalefanao daholo izy rehetra - mba hahafahanao mijery ireo hafatra alefan'ny tranokalanao.
Ny vahaolana, mazava ho azy, dia ny fametrahana plugin SMTP izay mandefa ny mailakao hiala amin'ny kaontinao Microsoft fa tsy atosika fotsiny avy amin'ny mpizara anao. Ho fanampin'izay, izaho dia manoro hevitra anao hanangana a misaraka ny kaonty mpampiasa Microsoft ho an'ireo fifandraisana ireo ihany. Amin'ity fomba ity dia tsy mila miahiahy momba ny famerenako ny teny miafina ianao izay hampiato ny fahafahany mandefa.
Te hanangana Gmail ve ianao? Kitiho eto
Plugin WordPress WP WPTP Easy
Ao amin'ny lisitry ny plugins WordPress tsara indrindra, tanisinay ireo Easy SMTPTP plugin ho toy ny vahaolana amin'ny fampifandraisana ny tranonkalanao WordPress amin'ny mpizara SMTP hanamarinana sy handefasana mailaka mivoaka. Tsotra ny fampiasana azy ary misy koa ny kiheba fitsapana azy manokana amin'ny fandefasana mailaka!
Ireo fikirana ho an'ny Microsoft dia tsotra fotsiny:
Mila SSL: Eny
Mila TLS: Ie
Mitaky fanamarinana: Eny
Seranan-tsambo ho an'ny SSL: 587
Ity misy fomba fijeriny ny iray amin'ireo mpanjifako, Royal Spa (Tsy asehoko ny saha ho an'ny solonanarana sy tenimiafiko):
Mandefasa mailaka fanandramana miaraka amin'ny Plugin SMTP WP Easy
Apetaho ny teny miafina namboarina Easy WP SMTP ary hamarinina araka ny tokony ho izy. Andramo ny mailaka dia ho hitanao fa nalefa:
Azonao atao izao ny miditra amin'ny kaontinao Microsoft, mankanesa any amin'ny fampirimana nalefa, ary jereo fa nalefa ny hafatrao!
Tags: DMARCmora wp smtpmailaka mailakaHotmailLivemicrosoft 365toe-tsainamail phpalefaso mailakaSMTPsmtp pluginspfWordPressmailaka wordpressplugin WordPress